NoFap မှအဆင့် (၁၄) ဆင့်ပါသောအစီအစဉ်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
NoFap ထံမှ 14-Step ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ 20NoFap ထံမှ 14-Step ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
1. သငျသညျ Edge ချင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လာကြလိမ့်မည်။ မကျင့်။
2. သင်ကလွယ်ကူထင်လျှင်, သင်တစ်ခုခုမှားလုပ်နေလုပ်နေ, သို့မဟုတ်သင်မှားရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ပါပဲ။ မည်သူမဆိုသင်အရူးမခံပါနဲ့ - ဒီ shit ဖြစ်ပါသည် ခိုင်မာသော.
3. သငျသညျအမှုအရာကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်နားမထောင်ပါနဲ့။ ကျွန်မသင်ယူင့်တဦးတည်းအရာတစုံတခုရှိမယ့်ဆိုပါကသင့်ဦးနှောက်တစ်ဦးနှစ်ဦး-အချိန်ကိုက် bastard ကြောင်းဖွင့်နှင့်၎င်း၏ပြင်ဆင်ချက်အရဘာမှမပြုကြလိမ့်မည်။
4. အဆိုပါရှည်လျားသောညစောစောနံနက်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ဦးခေါင်းသို့ကြောင့်တူး။ သငျသညျတစ်မိနစ်မှတဆင့်ရနိုင်လျှင်မူကား, သင်နောက်တစ်နေ့မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည်။ ကြည့်ပါ။ သင်အခုကလုပ်နေလုပ်နေ!
5. သွားဖုံး။ ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကကူညီပေးသည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုနှင့်သင်၏အာရုံ Overload - အနံ့, မြင်ကွင်းများ, အသံ - ခေါ်ဆောင်သွားမဟုတျကွောငျးအရာကိုမဆို။ သင့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းထွက်ရေနစ်။ ကြောင်းအနည်းငယ်သာစကားသံကိုထုတ်ထားပါ။ သင့်ရဲ့ willpower အတူက Squish ။
6. သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဒါကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေကနေဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားဖူးတယ်ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ဒါဟာclichéမဟုတ်ပါဘူး။ သင်တို့သည်ဤမျှများမှာ ထူးခြားသောဒါကြောင့် သငျသညျ, အခြားမည်သူမဆိုမှ Nofap ကြိုးစားနေသင်၏အချိန်ကိုလုံးဝထပ်တူထပ်မျှလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ထွက် variable တွေကိုသန်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ကြောင်း၏အားသာချက်ကိုယူ; ဒါကြောင့်ဘက်ယမ်း။ အခြားသူများနှင့်သင့်ရဲ့ပုံပြင်များမျှဝေပါ။
7. သငျသညျမင်ျဂလာစေသည်တစ်ခုခု Pick နှင့်အထဲတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ။ အဆိုပါကုန်တိုက်မှာအမှိုက် bins ကျော်ကန်, အားကစားဆွဲ; ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူ။ ငါစီရင်တော်မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ကအခြားလူဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါ - နှင့် NoFap အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး - ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ကြသည်။ ငါကတိပေးတယ်။
8. အမှတ်ဤနေရာတွင်သင်တို့၏ရန်သူဖြစ်တယ်, သင်တစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကမုန်းသင့်တယ် '' အဘယျသို့လျှင် '' "ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ if-" ။ တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ ကိုယ့် Edge? တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ ကိုယ့် porn ကိုကြည့်? တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ? သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်း syllables Repeat ကကိုရုပ်ဆိုးသောအသံကိုနားထောင်။ ထိုသို့ပြုကြ၏။ အလေးအနက်ထား။
9. မကောင်းတဲ့ရက်ပေါင်းရှိလိမ့်မည်။ relapses ရှိလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးအုတ်ရိုးအပေါက်တစ်ပေါက်လာကြတယ်လိုတဲ့အခါကြိမ်ရှိလိမ့်မည်။ မကျင့်။ တတရာတွန်းအားပေး-ups လုပ်ပေးရန် vehemence ကိုသုံးပါ။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ပိုပြီးအဘို့အသွားပါ။ ကိုယ့်မြို့ရိုးအစိတ်ထိခိုက်ပါဘူး။ ဒါဟာ fixed ရစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။
10 ။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌တစ်ဦးကလောင်အမည်နဲ့မှတ်စုစာအုပ်န်းကျင်သယ်ဆောင်။ သင်တစ်ဦးတတ်ပြီးခံစားရအခါတိုင်း, သင့်ခံစားချက်တွေကိုသင်၏လက်ချောင်းများ၏အကြံပေးချက်များမှာစုပေါင်းပြီးနှင့်သင့်နှလုံး clench အောင်ရဲ့အဘယ်အရာကိုဆွဲနိုင်အောင်ကျယ်လောင်သင့်ရဲ့ဂီတကိုတက် crank ။ အဆုံးပေါ်နာရီကြောင်းလုပ်ပါ။ သငျသညျမောင့်သည်အထိကိုရပ်တန့်မနေပါနဲ့။
11 ။ သင်အဘို့အလာပါတယ်ရှိသမျှတို့, ခဏပြန်ခြေလှမ်းပြည့်စုံပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရတဲ့အခါ။ ဘယ်လိုခံစားရလဲ? သင်အမှန်တကယ်အကြောင်းအရာနေလျှင်, အသိုင်းအဝိုင်းထံမှဝေးလမ်းလျှောက်ထံမှသင်တို့ရပ်တန့်လုံးဝဘာမျှမနှင့်ဘယ်သူမှလည်းမရှိ။ ဆိုတာသတိရပါ, သင်၏ပုံးစာရင်းပိတ် Nofap စိန်ခေါ်မှုကူးနိုင်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အထူးခံစားကြရသည်။ သင်သည်သင်၏စွဲရိုက်နှက်ပါတယ် အကယ်. လွန်းသည်ဟုပယ်ဖြတ်ကူး။ သငျသညျအကွောငျးကိုဝါကွှားဖို့အများကြီးပါတယ်။
12 ။ တစ်ဦးက relapse သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအပေါငျးတို့သသုတ်မထားဘူး။ ပြန်ညှိနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မများအတွက်ပါဝငျသောအရာကို၏ရှုပ်ထွေးနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်မရောထွေးပါနဲ့။ သင့်ရဲ့အခက်ခဲဆုံးကြိုးစားပါနှင့်ကိုယ်အိပ်ရကြပါဘူး။ ထိုသို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါတယ်။
13 ။ သငျသညျနာကျင်အခါနေ့ရက်များရောက်လိမ့်မည်။ သနားကလက်ခံပါ။ အနည်းငယ်နာကျင်မှုအားလုံးအပြီးသင်အသကျရှငျနေကိုသိခွင့်ပေးသည်။
14 ။ သင့်ရဲ့, ကိလေသာလွန်ကျူးအတှေးအထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်အာရုံမထားပါနဲ့။ ဒါကမညီကြောင်းအတှေးအ tantalizing သူတို့အားဆက်ကပ်အပ်နှံသည့် Nook နှင့်သင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၏ crannies ထဲသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသူတို့ကို shoves ။ porn ယနေ့ခေတ်မညီကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ fapping ဖြစ်ပါတယ်မရှိ။ သူတို့ကပဲပြန်သင့်ရဲ့အလားအလာကနေသင်တို့ကိုကိုင်ထားပါတယ်။ ဒီနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလျှင်, သွေးဆောင်အဖြစ်မှန်နှင့်အတူရောဖြစ်လာကြကုန်အံ့။ ရုံအကြံအစည်ကွာတွန်းကြပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး, သူတို့ကိုဝန်ခံ။
ပြီးတော့တစ်ဦး stainless-သံမဏိလင်းနို့နှင့်အတူ ballpark ထဲကသူတို့ကိုနှိပ်ပါ။
Nofap များအတွက် 14 အဆင့်အစီအစဉ်။(self.NoFap)